မြင့်သော အရှိန် rotary လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > မြင့်သော အရှိန် rotary လျှပ်စစ် actuator
မြင့်သော အရှိန် rotary လျှပ်စစ် actuator
AOX-မေး စီးရီး မြင့်သော အရှိန် rotary လျှပ်စစ် actuator ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ လေးပုံတပုံ အလှည့် လုပ်ငန်းလည်ပတ် လျှောက်လွှာများ ထိုကဲ့သို့သော အဖြစ် ဘောလုံးကို, လိပ်ပြာ, ပလပ်ဂ် အဆို့ရှင် နှင့် တူသော usages.AOX-မေး စီးရီး မြင့်သော အရှိန် rotary လျှပ်စစ် actuator အစေခံ အားလုံး ကျော်လွန် အဆိုပါ ကမ္ဘာကြီး, အပါအဝင် ဥရောပ, အဆိုပါ Americအဖြစ်, ICAO, သြစတြေးလျ, အာဖရိက, အာရှ, အဆိုပါ အလယ်တန်း Eအဖြစ်t နှင့် Souအဆိုပါအဖြစ်t အာရှ နိုင်ငံပေါင်း။ ဒါဟာ ဖြစ် ကျယ်ပြန့် အသုံးပြုခံ့ တွင် ရေ ကုသမှု, heatတွင်g, ရေနံ, ဓါတုဗေဒ တွင်dustry, အီလက်ထရွန်းနစ်, အလင်း တွင်dustry, အစားအစာ, medicတွင်e, အထည်အလိပ်, စက္ကူ makတွင်g, ရေအားလျှပ်စစ်, သင်္ဘောများ, smeltတွင်g, အသစ်က အင်အား နှင့် oအဆိုပါr လယ်ကွင်း။ တွင် ထို့အပြင်, က hအဖြစ် establဖြစ်hed အလွန် ဖော်ရွေ ဆက်ဆံရေး wကh များသော ဉစ္စာဓန 500 ကုမ္ပဏီများသည်။
AOX-မေးစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့် rotary လျှပ်စစ် actuator ၏ 2. ရှဲလ်: Hard လူမီနီယမ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောစက်မှုပတ်ဝန်းကျင်ဆန့်ကျင် coated ပြင်ပ epoxy အမှုန့် anodized ။
AOX-မေးစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့် rotary လျှပ်စစ် actuator များအတွက် 3. ကိုယ်ပိုင်သော့ခတ်: အဆို့ရှင်ကနေပြောင်းပြန်လိမ်အားဆန့်ကျင်မပြောင်းလဲအဆို့ရှင်၏အနေအထားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားနှစ်ဆတီကောင်များကပေး။
4. ဂီယာ: အ AOX-မေးစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့် rotary လျှပ်စစ် actuator ၏ပြည်တွင်းရေးဒီဇိုင်းတီကောင်ဂီယာနဲ့တီကောင်ဒီဇိုင်းနိယာမချမှတ်။ အတိအကျတီကောင်ဂီယာယန္တရားအဆိုပါ actuator ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှု, တည်ငြိမ်ဂီယာနိမ့်ဆူညံသံများနှင့်ကြာမြင့်စွာဝန်ဆောင်မှုအသက်ကိုစေသည်သောထိထိရောက်ရောက်မြင့်သောလိမ်အားထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်သည်။ Self-သော့ခတ် function ကိုနှင့်အတူကပြောင်းပြန်လည်ပတ်တားဆီးနိုင်ပြီး, ၎င်းဂီယာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, ဆီထည့်ရန်မလိုအပ်တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ 20 ကျော် years.The အဓိကအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများစက်စင်တာတို့ပါဝင်သည်, CNC တွင်ခုံ, CNC ကြိတ်စက်, CNC တူးဖော်စက်, CNC တူးဖော်စက်, ပလာစမာရေမှုန်ရေမွှားဂဟေဆော်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ရေမှုန်ရေမွှားခြောက်သွေ့လိုင်းနှင့်အခြားများအတွက်လျှပ်စစ် actuators များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့ပြီး ပစ္စည်းကိရိယာများ, ကြိတ်, ငြီးငွေ့စရာ, တူးဖော်ခြင်း, ပစ်, ကြိတ်ခြင်းနှင့်စက် tools.We ၏အခြားအမျိုးအစားများတည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရစက်မှုထုတ်ကုန်များ၏ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်လက်ရာမြောက်သောနည်းပညာအဖြစ်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများဖြစ်ကြသည် AOX-မေးစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုသေချာကြောင်းအပြင်းအထန်တောင်းဆို rotary လျှပ်စစ် actuator ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ rotary လျှပ်စစ် actuator ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို IS09001, ISO14001, အီး, ATEX, gost, EAC, SIL3, IP68, Cu-TR, ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်-အထောက်အထားအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်လည်းရယူထားပါတယ် AOX-မေးစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့်, တင်းကျပ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတွက် အားလုံးအဆင့်ဆင့်နှင့်အဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစံချိန်စံညွှန်းများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးလှံတံ၏သဘောတူညီမှုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက: ကအထူးကအကြောင်း 3-5 ရက်အတွင်းကြာစိတ်ကြိုက်လျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်, စတော့ရှယ်ယာရှိအဆိုပါပုံမှန်အစည်းအဝေး AOX-မေးစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့် rotary လျှပ်စစ် actuator ။
AOX-မေးစီးရီးမြန်နှုန်းမြင့် rotary လျှပ်စစ် actuator အကြောင်းကိုငွေပေးချေသို့မဟုတ်အခြားပြဿနာ၏အကြောင်းမေးခွန်းမေး:
Q: တကယ်သင့်ရဲ့ actuator ရဲ့အရည်အသွေးသည်မည်မျှမဟုတ်ကျင့်သောကြောင့်ငါအမိန့်တော်ရှေ့မှာနမူနာ get နိုင်သလား?
hot Tags:: မြင့်သော အရှိန် rotary လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်